Liiska Hubinta Dayactirka WordPress: Liiska Ugu Dambeeya ee Talooyinka, Qalabka, iyo Habdhaqanka Ugu Fiican | Martech Zone
Liiska Hubinta Dayactirka ee WordPress: Liiska ugu dambeeya ee Talooyinka, Qalabka, iyo Dhaqanka ugu Fiican
Jimco, Juun 20, 2018 Sabtida, Oktoobar 24, 2020 Douglas Karr
Maanta uun waxaan la kulmay laba ka mid ah macaamiisheenna oo ku saabsan rakibaaddooda WordPress. Anigu waxaan ahay iibiya-agnostic ku saabsan nidaamyada maaraynta waxyaabaha. Caannimada guud ee WordPress ayaa runtii ka caawisay tan iyo inta badan dhinacyada saddexaad ay la midoobi doonaan, iyo mawduucyada iyo nidaamka deegaanka ee loo yaqaan 'plugin ecosystem' waa sida ugu wanaagsan ee aad heli karto Wax yar ayaan soo saaray Plugins WordPress, naftayda, si aan u caawiyo macaamiisheenna una taageerno nidaamka deegaanka.
Taasi waxay tiri, maahan la'aan arimaheeda, in kastoo. Sababtoo ah waa wax caan ah nidaamka maamulka content, WordPress bartilmaameedka koowaad ee jabsadayaasha iyo khayaanada meel walba. Iyo, fudeydkeeda adeegsiga, way fududahay in la dhiso rakibo burooyin leh oo sababa goobaha inay ku shiidaan hakad. Iyada oo wax qabadku aad muhiim ugu yahay maalmahan isticmaalka iyo ku habboonaanta raadinta, tani si fiican ugama bogto bogag badan.
Taasi waxay tiri, way fiicantahay inay jiraan dad sida BigrockCoupon ah oo soo saaray qoraallo dhammaystiran si ay uga caawiyaan maamulka WordPress. Xogtooda, Liiska Hubinta Dayactirka Websaydhka WordPress, wuxuu leeyahay in ka badan 50 talooyin iyo tababaro muhiim u ah milkiilayaasha degellada inay jadwal u sameeyaan shaqadooda si looga hortago arrimaha.
Waa tan Liistkayga Dayactirka WordPress
Infographic wuxuu leeyahay waxyaabo aad u tiro yar, laakiin hadaad kuwaas daboosho waxaad ka hor mari doontaa tartamayaashaada! Waxaan sidoo kale hayaa liiska ah plug-ka WordPress ugu wanaagsan in aan tijaabinay oo aan hirgelinay… hubi inaad calaamadeysato!
Kaydso Macluumaadkaaga WordPress - Kahor intaadan wax ku sameyn WordPress, hubi inaad haysato keyd aad u fiican oo laga ilaaliyo goobta. Tani waa sababta aan ugu isticmaalno WordPress Maareynta Maareynta Flywheel. Waxay leeyihiin otomaatig iyo buug gacmeedyo leh hal-gujin soo celin. Marnaba uma baahnin inaan wax abaabulno ama karti u yeelo… marwalba way joogeen!
Sii WordPress Baaritaan - Ku socodsii bartaada Baaritaanka WP waxaadna ka heli doontaa tan waxyaabo aad ku nadiifiso bartaada. Ma aha in arin kasta ay si ba'an kuu saameyneyso - laakiin in yar oo ka-fiicnaansho ayaa la xisaabiyaa!
Hubinta Xawaaraha Websaydhka - Ka faa'iidayso Bogagga Bogagga 'Google' ee boggan si loogu falanqeeyo bogagga arrimaha xawaaraha.
Hubi Xiriirada Jaban - Markaan adeegsaday dhowr qalab oo khadka tooska ah, weligay ma helin wax ka fiican Buuqda Riyaha SEO Spider loogu gurguuro bogagga xiriirka jaban. Infographic wuxuu kugula talinayaa in lagu daro fiilo si tan loo sameeyo, laakiin taasi waxay hoos u dhigi kartaa waxqabadkaaga waxayna kugula kulmi kartaa xoogaa dhibaato ah martidaada.
301 Toosinta Xiriirinta Jabtay - Ka baxsan macaamiisheenna ayaa martigeliyay WPEngine, oo leh maamul u jeedin u gaar ah, dhammaan macaamiisheenna ayaa maamula Toosinta plugin.
U cusbooneysii WordPress, Mawduucyada, iyo Plugins-ka nooca ugu dambeeya - Kani waa lagama maarmaan maalmahan marka la eego arrimaha amniga. Haddii aad ka mid tahay dadka waawayn ee ka walwalsan kor u qaadista qalabku wuxuu jebin karaa boggaaga, waxaad u baahan kartaa inaad raadsato qalab cusub. Dhammaan horumariyayaashu waxay fursad u leeyihiin inay tijaabiyaan mawduucyadooda iyo wixii ku saabsan sii deynta WordPress ee soo socda.
Tirtir Faallooyinka Spam-ka - Waxaan aad ugu talin lahaa in la helo Jetpack iyo ku biirista Akismet si ay uga caawiso tan.
Tirtir Mawduucyada aan La Adeegsan, Sawirada, iyo Kuwa Firfircoon, Xadgudbaha Aan La Adeegsan - Xayeysiisyo firfircoon ayaa ku daraya lambar dheeri ah boggaaga markaad daabacayso. Dusha sare ayaa runtii gaabis ku noqon kara bartaada sidaa darteed habka ugu fiican ee aad u baahan tahay waa inaad sameysid la'aan.
Tilmaamo cad iyo Qashin - Markuu yaraado keydka macluumaadkaaga, ayaa si deg deg ah su'aalaha u soo jiidaneyso waxyaabaha ku jira Hubso inaad nadiifiso bogga oo aad dhejiso noocyada iyo sidoo kale boggaga iyo qoraallada la tirtiray si joogto ah.
Kormeerka Amniga Shabakada - Flywheel Ma nihin taageerayaal waaweyn oo ka mid ah fiilooyinka amniga, waxaan kugula talin lahaa inaad la socoto marti weyn. Kooxdoodu waxay ku sii sugnaan doontaa amniga iyaga oo aan lahayn waxqabadka dusha sare ee fiilada.
Tayadoo Jadwalka Xogta - Haddii aad rakibtay xoogaa mawduucyo ah iyo waxyaabo dheeri ah, badankood waxay ku dhaafaan xogta gadaal keydkaaga. Tani waxay ku dari kartaa arrimaha waxqabadka waxayna kordhin kartaa waqtiyada culeyska maadaama xogta aan la isticmaalin wali laga yaabo in la weyddiisto oo la rakibo inay muuqato iyo in kale. Qalabka ku qoran waa mid duug ah, waxaan kugula talin lahaa Nadiifiyaha Xogta Sare.
Iskudhicinta Sawirada - Sawirada aan la jaan qaadin waxay si ba'an u saameyn karaan waxqabadka bartaada. Waxaan jecelnahay Kraken iyo qalabkeeda WordPress ee lagu cadaadiyo sawiradayada.
Hubi Ka-gaabinta Emailka iyo Foomka Xiriirka Shaqeynta - Foomamka cuf Waxaan mar cabasho ka helnay macmiil la filayo in degelkooda cusub ee la furay ay leeyihiin foomam laakiin aysan helin wax tilmaam ah. Markii aan baarnay goobta, waxaan ogaanay in foomamku ay yihiin foomam wax lagu duubo oo qof kasta oo laga yaabo inuu la soo xiriiray shirkadda uu gudbiyo laakiin xogta waligeed meelna ma aadin. Xanuun badan! Waxaan u adeegsanaa macmiil KASTA!
Dib u eeg Google Analytics - Had iyo jeer waa wax lala yaabo macaamiisheenna in yar oo ka mid ah bogaggooda ay dhab ahaan ku qoran yihiin makiinadaha wax lagu raadsado ama xitaa ay akhriyaan dadka soo booqda. Waxaan si gaar ah u qadarinaynaa Qulqulka isticmaalaha, warbixinta muujineysa sida dadku ugu dhex wareegaan bartaada.
Hubi Kontaroolka Raadinta Google - Falanqaynta waxay ku tusineysaa oo keliya cidda dhabta ah ee timid goobtaada. Ka warran dadka ku eegay boggaaga natiijada mashiinka raadinta? Hagaag, Maamulayaasha Websaydhadu waa aaladda lagu arko sida Google u arko bartaada caafimaadka, xasiloonida, iyo natiijooyinka raadinta. Isha ku hay xogta khaladaadka iskuna day inaad saxdo markay soo baxayaan.
Cusboonaysii Mawduucaaga - Marka la qorayo qoraalkan, waxaan cusbooneysiiyay ugu yaraan nus dersin qoraal oo aan tixraacayay si aan u hubiyo in ay la socdeen ilaa taariikhda. Waad la yaabi doontaa arrimaha ku saabsan bartaada soo baxda - sida xiriiriyeyaasha bogagga dibedda ee aan sii jirin, sawirrada laga yaabo inay dhibaatooyin leeyihiin, iyo waxyaabaha waqtigoodu dhammaaday. Ka dhig waxyaabahaaga mid cusub si ay u wadaagaan, loo muujiyo, oo ay u qiimeeyaan dhagaystayaashaada.
Dib u eegida Cinwaanka & Meta Sharaxaadda tags - Habka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo bartaada mashiinnada raadinta ayaa ah in la rakibo oo la isku hagaajiyo fiilooyinka. Cinwaannada ayaa ka caawin doona boggaaga in si sax ah loogu muujiyo waxa ku jira muujinta iyo sharraxaadda maadada ayaa ku kicin doonta isticmaaleyaasha mashiinka raadinta inay ku riixaan natiijada liiskaaga.
Waa tan faahfaahinta buuxda oo ka kooban tilmaamo iyo tabo ka badan 50 BigrockCoupon!
Tags: 301 Toosi loogu talagalay Xiriirinta JabtayKaydso Macluumaadkaaga WordPressBadal eraygaaga sirta ahKa eeg Adsense Ads websaydhkaagaHubi Iskuxirayaasha XiriirkaHubi Ka-gaabinta Emailka iyo Foomka Xiriirka ShaqeyntaHubi Links jajabanHubi Qalabka Google Console (Webmaster)Hubi Kheyraadka La IsticmaalayHubi Iskuxirka Sidebar iyo BlogrollsHubi Xiriiriyaha Warbaahinta BulshadaHubi Istaatistikada WebsaydhkaHubi Amniga Website-kaHubi Xiriirinta Soo DegitaankaagaHubi Quudinta BoggaagaHubi Raadinta BoggaagaNadiifi QashinkaQeex Bareega Gawaarida GawaaridaTirtir Faallooyinka Spam-kaTirtir Plugins aan loo baahnaynTirtir Mawduucyada aan loo baahnaynJooji Cusbooneysiinta Tooska ah ee WordPressJooji habka khaladkaJooji Trackbacks iyo PingbacksSahaminta SawiradaKordhi Xadka Xusuustaiskaanka furinFaylasha Warbaahinta NadiifiTayaynta Miisaska XogtaDayactirka DhajintaCusbooneysii Banner Header iyo Sawirada GoobtaKa saar Qabyo qoraalka & Dib u eegista boostadaKa saar Maamulayaasha Websaydhada aan FirfircooneynCusboonaysii Marti gelinta & DomainsJawaab faallooyinkaDib u eeg Google AnalyticsDib u eeg Meta cinwaanka & Meta description tagsDib u eegid Bogga-SEODib U Eeg Boggaaga Nagu saabsanKu Qaadi Goob WP CheckupQaado Nuqulada Maalinlaha ahTijaabiyaha Browser & Isku-habboonaanta QalabkaKu cusbooneysii taariikhda Xuquuqda-lahaanshaha ee CagahaagaCusboonaysii MawduucaagaCusboonaysii Qalabkaaga WordPressCusbooneysii Mawduucaaga WordPressCusbooneysii qalabkaaga WordPressU cusbooneysii WordPress nooca ugu dambeeyayXaqiijinta WebsaydhkaagaKormeerka Amniga ShabakadaHubinta Xawaaraha Websaydhkabaaritaanka wp
7 Tilmaamaha Ecommerce ee Abuurista Mawduucyada beddelaya